Onye isi ndị ọrụ ahụike ọha na Canada wepụtara mmelite ọhụrụ na COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Onye isi ndị ọrụ ahụike ọha na Canada wepụtara mmelite ọhụrụ na COVID
Ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu na-ebute nrụgide na nchekasị nye ọtụtụ ndị Canada, ọkachasị ndị na-enweghị njikere ịnweta netwọkụ nkwado ha mgbe niile. Site na Portal dị n'ịntanetị nke Wellness Together Canada, ndị mmadụ nọ n'afọ niile n'ofe mba ahụ nwere ike ịnweta ahụike uche ozugbo, efu na nzuzo yana nkwado iji ọgwụ eme ihe, awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. Nke a bụ ihe onye isi ọhaneze na-ahụ maka ahụike kwuru taa:
Healthlọ Ọrụ Ahụ Ike Ọha nke Canada (PHAC) na-aga n'ihu na-enyocha ihe ngosi ọrịa COVID-19 iji chọpụta ngwa ngwa, ghọta ma kwupụta okwu gbasara nchegbu na-apụta. Taa, m gosipụtara mmelite banyere ọrịa na-efe efe nke mba na ihe nlereanya. Ndị na-esonụ bụ nchịkọta dị nkenke nke nsonaazụ nlegharị anya yana ọnụọgụ mba ọhụrụ na usoro.
Amụma nlegharị anya ogologo ogologo nke emelitere taa na-egosi na ebili mmiri nke anọ nwere ike ịga n'ihu na-agbada n'izu ndị na-abịa ma ọ bụrụ na mgbasa ozi abawanye. Site na oke nke ụdị Delta na-efe efe nke ukwuu, amụma ogologo ogologo na-aga n'ihu na-emesi mkpa na mmetụta bara uru nke usoro ahụike ọha na eze na ịkpachapụ anya nke onye ọ bụla, ọbụlagodi na ọkwa mkpuchi ịgba ọgwụ mgbochi ugbu a. Ka anyị na-aga n'ihu na-ahụ akara ngosi dị mma, ikpe nwere ike ịmalite ibilite ọzọ site na naanị mmụba dị nta na mbufe. Nke a na-egosi na a ka nwere ike ịnwe ọnya na ọnọdụ COVID-19 anyị na ọnwa oyi nwere ike weta ihe ịma aka ndị ọzọ ka ọrịa iku ume ndị ọzọ na-alọghachi, mana anyị maara na omume onye ọ bụla na-arụ ọrụ iji belata ọrịa ma chebe pụọ na nsonaazụ siri ike sitere na COVID-19 dị ka. yana ndị ọzọ na-akpata iku ume.
Kemgbe mmalite nke ọrịa a, enweela ikpe 1,725,151 nke COVID-19 na ọnwụ 29,115 a kọrọ na Canada. Ọnụọgụ mkpokọta ndị a na-agwa anyị gbasara oke ibu nke ọrịa COVID-19 ruo taa, ebe ọnụọgụ ndị nọ n'ọrụ, ugbu a na 23,162, na nkezi ngagharị ụbọchị 7 na-egosi ọrụ ọrịa ugbu a na usoro ịdị njọ.
Na mba, ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu na-agbada, yana nkezi nke 2,231 ọhụrụ a na-akọ kwa ụbọchị n'ime ụbọchị 7 kachasị ọhụrụ (Ọkt 29-Nọvemba 4), mbelata nke 5% ma e jiri ya tụnyere izu gara aga. Usoro nnabata ụlọ ọgwụ na nlekọta dị oke egwu, nke metụtara ndị a na-enyeghị ọgwụ mgbochi, na-ebelata na mba mana ọ ka na-ebuli elu. Ihe omuma mpaghara na mpaghara kacha ọhụrụ na-egosi na a na-agwọ ihe dị ka mmadụ 1,934 nwere COVID-19 n'ụlọ ọgwụ Canada kwa ụbọchị n'ime ụbọchị 7 kacha ọhụrụ (Ọkt 29-Nọvemba 4), nke dị 8% dị ala karịa izu gara aga. Nke a gụnyere, na nkezi, mmadụ 595 a na-agwọ na ngalaba nlekọta ahụike (ICU), 8% na-erughị izu gara aga yana nkezi nke ọnwụ 27 ka a na-akọ kwa ụbọchị (Ọkt 29-Nọvemba 4). Ọnụọgụ ụlọ ọgwụ ogologo oge, ọnụọgụ ndị a ka dị elu na-aga n'ihu na-etinye nnukwu nsogbu na akụrụngwa ahụike mpaghara, ọkachasị ebe ọnụọgụ ọrịa dị elu yana ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị ala.
N'ime ikuku nke anọ a nke ọrịa COVID-19 na Canada, ọrịa na nsonaazụ siri ike nwere ọtụtụ isi ihe:
• Na mba, Delta Variant of Concern (VOC) na-efe efe nke ukwuu, na-ebute ihe ka ọtụtụ n'ime ikpe a kọrọ na nso nso a, jikọtara ya na oke njọ, ma nwee ike ibelata irè ọgwụ mgbochi.
• Ọtụtụ ikpe akọpụtara, ụlọ ọgwụ na ọnwụ na-eme n'etiti ndị a na-enyeghị ọgwụ mgbochi
• Nje Virus na-agbasa na mpaghara nwere obere mkpuchi ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-enye ihe egwu na-aga n'ihu maka mpụta na nnọchi VOC ọhụrụ, gụnyere ihe egwu nke VOC nwere ikike ịgbanarị nchebe ọgwụ mgbochi.
N'agbanyeghị ụdị SARS-CoV-2 dị na mpaghara, anyị maara na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana usoro ahụike ọha na omume onye ọ bụla, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji belata mgbasa ọrịa na nsonaazụ siri ike. Karịsịa, ihe akaebe na-aga n'ihu na-egosi na usoro ọgwụgwọ ahụike-Canada anabatara COVID-19 zuru oke na-enye nchebe dị ukwuu megide ọrịa siri ike, ọkachasị n'etiti ndị ntorobịa. Dabere na data kachasị ọhụrụ sitere na mpaghara na ókèala iri na abụọ maka ndị tozuru etozu, afọ 12 ma ọ bụ karịa, n'ime izu ndị na-adịbeghị anya (Septemba 12 - Ọktọba 19, 16) na ịhazigharị maka afọ, nkezi ọnụego kwa izu na-egosi na ndị na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike ịbụ nke ukwuu. nọrọ n'ụlọ ọgwụ nwere COVID-2021 ma e jiri ya tụnyere ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke.
• N'ime ndị ntorobịa na ndị okenye dị afọ 12 ruo 59, ndị a na-agbaghị ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike ịnọ n'ụlọ ọgwụ na COVID-51 ugboro 19 karịa ndị gbara ọgwụ mgbochi zuru oke.
• N'ime ndị toro eto dị afọ 60 ma ọ bụ karịa, ndị a na-agbabeghị ọgwụ mgbochi nwere ike ịnwe COVID-19 ugboro 19 karịa ndị gbara ọgwụ mgbochi.
Dị ka ọnwa Nọvemba 4, 2021, ógbè na ókèala enyela ihe karịrị nde 58 ọgwụ mgbochi COVID-19, yana data mpaghara na mpaghara kacha ọhụrụ na-egosi na ihe karịrị 89% nke ndị gbara afọ 12 ma ọ bụ karịa anatala opekata mpe otu ọgwụ COVID- Ogwu 19 na ihe karịrị 84% agbaala ọgwụ mgbochi ugbu a nke ọma. Ihe mkpuchi mkpuchi ọgwụ mgbochi afọ akọwapụtara, dị ka nke Ọktoba 30, 2021, na-egosi na ihe karịrị 88% nke ndị mmadụ gbara afọ 40 ma ọ bụ karịa nwere opekata mpe otu dose yana ihe karịrị 84% agbanyere ọgwụ mgbochi zuru oke, ebe 84-85% nke ndị toro eto dị afọ 18-39. afọ nwere opekata mpe otu dose na ihe na-erughị 80% bụ ọgwụ mgbochi zuru oke.
Ka ọtụtụ n'ime ihe omume anyị na-aga n'ime ụlọ, ọdịda na oyi, anyị ga-agba mbọ nweta ọtụtụ ndị tozuru oke ka enwere ike ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 ngwa ngwa o kwere mee iji chebe onwe anyị na ndị ọzọ, gụnyere ndị nwere ike ọ gaghị ebuli nzaghachi mgbochi siri ike. ma ọ bụ onye na-enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ime usoro ahụike ọha n'oge na nke ezubere iche na idobe usoro nchekwa onye ọ bụla ga-adị oke mkpa maka ibelata ọnụego ọrịa COVID-19 yana ibelata mmetụta na ikike nlekọta ahụike. Ọ bụ ezie na ọgwụ mgbochi na-akwado nchebe anyị megide COVID-19, anyị kwesịkwara iche echiche banyere nlọghachi nke ọrịa iku ume ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịnọgide na-enwe ahụ ike site n'inyocha ọgwụ mgbochi ndị akwadoro, dị ka influenza na ọgwụ mgbochi ndị ọzọ maka ụmụaka na ndị okenye na idobe ihe ndị bụ isi na-enyere aka belata mgbasa nke COVID-19 yana ọrịa iku ume ndị ọzọ.
Mgbe COVID-19 ka na-ekesa na Canada na mba ụwa, omume ahụike ọha ka dị mkpa: nọrọ n'ụlọ / kewapụ onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà; mara ihe ize ndụ ndị metụtara ntọala dị iche iche; soro ndụmọdụ ahụike ọha na mpaghara ma jikwaa usoro nchekwa onye ọ bụla. Karịsịa, ịpụpụ anụ ahụ na iyiri mkpuchi ihu dabara nke ọma na nke a rụrụ nke ọma na-enye nchebe ọzọ nke na-ebelata ihe ize ndụ gị na ntọala niile, yana ịnweta ikuku ikuku kacha mma na oghere ime ụlọ.